Samsung yakazivisa zviri pamutemo Galaxy Book 2 yakatevedzana, kuti isavhiringike neiyo Snapdragon 850-powered Galaxy Book 2 kubva makore mashoma apfuura. Inosanganisira iyo Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Book 2 Pro 360, Galaxy Book 2 360, uye Galaxy Book 2 Bhizinesi, Samsung yakachengeta mhando dzegore rapfuura (kazhinji), uye yakaasimudza neIntel 12th-gen processors uye FHD webcams. Pakupedzisira… [Verenga zvakawanda ...] nezve Hands on neSamsung Galaxy Book 2 Pro akatevedzana
Samsung Galaxy Book 2 Pro uye Bhuku 2 Pro 360 inounza Intel 12th-gen inogadziridza kune matete uye akareruka malaptop.
Samsung yakazivisa shanduro itsva dzeGalaxy Book, ine Galaxy Book 2 Pro neGalaxy Book 2 Pro 360, paMWC 2022. Sezvakamboonekwa kubva kumamodheru aya, iyo 360 inowana dhizaini inochinjika, inotsigira S Pen saka pane imwezve. zvekushandisa kune vanoda kudhirowa kana kutora manotsi. Ose mamodheru achapa 13.3 uye 15.6-inch saizi yekuratidzira, ine ese mamodheru emitambo ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Book 2 Pro uye Bhuku 2 Pro 360 inounza Intel 12th-gen inogadziridza kune matete uye akareruka malaptops.